ESI EWEPU IHE OSISE SITE NA PDF FAỊLỤ - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Esi eweputa PDF site na PDF
Usoro iji zoo ibe a bụ ọrụ nkịtị n'ọtụtụ netwọk mmekọrịta, gụnyere Facebook. N'akwụkwọ a, a ga-eme nke a site na iji ntọala nzuzo na weebụsaịtị na ngwa ngwa. Anyị nọ na ntuziaka a ga-agwa ihe niile metụtara mmechi nke profaịlụ.
Facebook Profaịlụ nso
Ụzọ kachasị mfe iji mechie profaịlụ Facebook bụ ka ihichapụ ya dịka ntuziaka ndị a kọwara n'isiokwu ọzọ. Ọzọkwa, a ga-akwụ ụgwọ uche nanị na ntọala nzuzo, nke na-enye ohere maka ịwepụ kpamkpam nke ajụjụ ahụ ma belata mmekọrịta nke ndị ọrụ ndị ọzọ na ibe gị.
Gụkwuo: Ihichapụ akaụntụ na Facebook
Nhọrọ 1: weebụsaịtị
Ebe nrụọrụ weebụ Gọọmenti na-enweghị ọrụ dịka ọtụtụ netwọk mmekọrịta ndị ọzọ. N'otu oge ahụ, ntọala ndị dịnụ na-enye gị ohere ịmepụtụchaa ajụjụ ahụ site na ndị ọrụ ndị ọzọ nke akụ ahụ na ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke omume.
Site nchịkọta nhọrọ dị n'akụkụ aka nri n'elu saịtị, gaa "Ntọala".
N'ebe a, ị ga-agbanye gaa taabụ "Eziokwu". N'okpuru ebe a bụ akụkụ nke nzuzo.
Gụkwuo: Otu esi ezobe ndị enyi na Facebook
Na-esote ihe "Ònye nwere ike ịhụ posts" tọọ uru "Naanị m". Nhọrọ dị mgbe ịpịrị njikọ ahụ. "Dezie".
Dị ka ọ dị mkpa na ngọngọ ahụ "Omume gị" jiri njikọ ahụ "Machibido ohere nke akwụkwọ ochie". Nke a ga-ezochi ihe ndekọ kachasị ochie site na akụkọ ahụ.
Na nchịkọta na-esote na nke ọ bụla, debe nhọrọ "Naanị m", "Ndị Enyi nke Enyi" ma ọ bụ "Ndị enyi". N'okwu a, ị nwekwara ike igbochi ọchụchọ maka profaịlụ gị n'èzí Facebook.
Ọzọ, mepee taabụ ahụ "Ndekọ na mkpado". Site n'omume na isi ihe dị n'ahịrị nke ọ bụla "Ihe Edere" setịpụrụ "Naanị m" ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ mechiri emechi.
Iji zoo akara ọ bụla site na ndị ọzọ, na ngalaba "Tags" Megharịa usoro ndị a kpọtụrụ aha na mbụ. Ọ bụrụ na achọrọ, ị nwere ike ime ka ihe wepụrụ maka ihe ụfọdụ.
Maka ntụkwasị obi dị ukwuu, ị nwere ike ime ka ịnweta akwụkwọ na ederede akaụntụ gị.
Ihe dị mkpa taabụ na-egosi "A na-enweta akwụkwọ dị iche iche". Enwere ngwaọrụ maka igbochi ndị ọrụ Facebook ịdenye aha na profaịlụ gị.
N'iji ntọala nke nhọrọ ọ bụla, dozie ókè kachasị ike. Ihe ọ bụla dị iche iche adịghị echebara echiche, ebe ọ bụ na ha na-ekwughachi ibe ha na njedebe nke afọ.
O kwere omume ijide onwe anyị iji zoo ozi niile dị mkpa maka ndị ọrụ na-abụghị akụkụ "Ndị enyi". Enwere ike ihichapụ otu ndepụta ndị enyi dịka ntuziaka ndị a.
Gụkwuo: Otu esi ehichapụ ndị enyi na Facebook
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ibe site na mmadụ ole na ole, ụzọ kachasị mfe bụ iji gbochie.
Gụkwuo: Otu esi egbochie mmadụ na Facebook
Dị ka ihe atụ ọzọ, ị ga-emerụkwa ịnweta nkwupụta gbasara omume ndị ọzọ na-ejikọ na akaụntụ gị. N'oge a, usoro mmechi profaịlụ ga-agwụ.
Hụkwa: Otu esi gbanyụọ nkwupụta na Facebook
Nhọrọ 2: Ngwa ngwa ngwa
Usoro maka ịgbanwe agbanwe ntọala na ngwa ahụ adịghị iche na mbipute PC. Dị ka ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ, ọdịiche dị iche iche dị iche iche na-eme ka ndokwa dị iche iche nke ngalaba na ọnụnọ nke ihe nhazi ndị ọzọ.
Pịa akara ngosi akara ngosi na elu aka nri ihuenyo ma pịgharịa gaa na ndepụta nke ngalaba na "Ntọala na Nzuzo". Site ebe a, gaa na ibe "Ntọala".
Ọzọ chọpụta ngọngọ ahụ "Eziokwu" wee pịa "Ntọala Nzuzo". Nke a abụghị ngalaba na nhọrọ nzuzo.
Na ngalaba "Omume gị" maka ihe ọ bụla, setịpụ uru ahụ "Naanị m". Nke a abụghị maka nhọrọ ụfọdụ.
Mee otu ihe ahụ na ngọngọ ahụ. "Olee otu m ga - esi chọta gị ma banye gị". Site nyochaa na weebụsaịtị, ị nwere ike igbochi ọchụchọ maka profaịlụ site na engines ọchụchọ.
Mgbe ahụ, laghachi na listi izugbe na mpaghara ahụ ma mepee ihu "Ndekọ na mkpado". Lee egosi nhọrọ "Naanị m" ma ọ bụ "Ọ dịghị onye". Nhọrọ, ị nwekwara ike ịmegharị nkwenye nke ndekọ ndị na-ekwupụta peeji gị.
Nkebi "A na-enweta akwụkwọ dị iche iche" bụ ikpeazụ iji mechie profaịlụ. N'ebe a, afọ ndị dị iche dị iche na nke ndị gara aga. Ya mere, na paragraf atọ ọ bụla, ihe nkedo kachasị mma ga-agbadata ịhọrọ nhọrọ "Ndị enyi".
Tụkwasị na nke a, ịnwere ike ịga na ibe ntọala. "Online" ma gbanyụọ ya. Nke a ga-eme ka nleta ọ bụla gị na saịtị ahụ amaghị aha ndị ọrụ ndị ọzọ.
Na agbanyeghị ụzọ a chọrọ, ihe niile ị ga-eme na ihichapụ na igbochi ndị mmadụ, ịchọta ozi na ọbụna ihichapụ profaịlụ bụ kpam kpam. Enwere ike ịchọta ozi gbasara nsogbu ndị a na weebụsaịtị anyị na mpaghara kwesịrị ekwesị.